Ilhaan Cumar oo aabaheeda Geeryooday iyo Taariikh nololeedkiisa | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ilhaan Cumar oo aabaheeda Geeryooday iyo Taariikh nololeedkiisa
Image captionIlhan Cumar iyo Aabaheed Nuur Cumar
Farriinta Ilhaan ayaa waxa ay u qorneyd sidatan “Innaa Lilaahi Wa innaa Ilayhi raajicuun. Dhab ahaantii Allaah ayaa na abuuray isagaana u laabanaynaa. Waa murugo iyo xanuun wayn inaan aabahay Nuur Cumar Maxamed sagootiyay. Ma jiraan kalmado aan ku qeexi karo waxa uu ii ahaa iyo waxa uu u ahaa dhammaan dadkii yaqaanay ee jeclaa.”
Cabdulle Jimcaale ayaa waxa uu Nuur ku tilmaamay inuu ahaa “Nin ahlu taqwa ah ayuu ahaa, nin ahlu diin ah ayuu ahaa. Nuur waxa uu ahaa nin dadku jecelyahay oo aad iyo aad bashaash u ah. Nuur waxa uu ahaa nin farxaan ah. Nuur wuxuu lahaa calaamado dadka Ilaahay jecelyahay ay leeyihiin.” ayuu yiri Cabdulle Jimcaale.
Image captionCabdulle Jimcaale Jiisow
“Nin sarkaal ah oo ciidammada Soomaaliya ka tirsanaan jiray ayuu ahaa, sidayada oo kale. Aqoontiisa kale waxa uu ahaa nin mutacalim ah oo waxbartay.”
Cabdulle Jimcaale ayaa sheegay in ninka uu Nuur ahaa laga dheehan karo carruurta uu soo koriyay iyo sida ay bulshadooda wax u tareen: “Wax badan buu dalka iyo dadkaba u soo qabtay, oo waxaa lagu xasuusan doonaa dadka uu ka tegay oo gidigood mutacilimiin ahh. Waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo xildhibaan ah, weliba hooyadood way dhimatay isagaa soo koriyay oo wax soo baray, Alaha u naxariistee.
Ilhaan Cumar oo aabaheeda Geeryooday iyo Taariikh nololeedkiisa was last modified: June 16th, 2020 by Admin